Oniversite Ambohitsilaozana Voatery naato herinandro ny fampianarana
Raharaha volabe 70 000 Euros Tsy mety miloa-bava ilay minisitra
Niandry izay fanambarana ofisialin’ny minisitry ny fitsarana Rasolo Elise Alexandrine ny rehetra manoloana ny raharaha mafana momba ilay fanambaran’ilay Frantsay Houcine Arfa nilaza fa nandoa volabe 70 000 Euros taminy ho saran’ny fanafahana azy, saingy tsy nisy izany hatramin’izao.
Didy mikasika ny raharaha Sygmma Andrasana amin’ny 26 janoary
Mitohy ny fifandonana eo anivon’ireo tantsambo mpikambana eo anivon’ny Sygmma na ny sendikan’izany eto Madagasikara tarihin’ny sekretera jeneraliny Lucien Razafindraibe an-daniny sy Basola Nomenjanahary, an-kilany.
EPP Antandrokomby Anosizato andrefana Saika tsy nety niala ireo traboina sasany
Saika tsy nety niala ireo traboina sasany natoby tetsy amin’ny EPP Antandrokomby Anosizato Andrefana, indrindra fa ireo nipetraka tao amin’ny trano natokana hianaran’ny préscolaire.
Vanim-potoanan’ny Pesta 2018 Mety hampihemotra fifidianana
Mahalasa saina ny mpanara-baovao ihany ny fanazavan’ny manampahefana Malagasy ny taon-dasa 2017 teo, mikasika ny valanaretina pesta.
Mpivarotra eny Andrefan’i Mananjara Hananganan’ny CUA « Pavillon » vaovao
Mpivarotra efa ho 320 mahery avy etsy Andrefan’i Manajara, ao anatin’ny Boriborintany faha-4, monina sy manao asa fivarotana eny an-toerana no tonga nidinidinika sy nitafatafa ary niarahaba nahatratra ny taona 2018 ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly talata 16 jolay tolakandro.
Olana eny amin’ny boriborintany faharoa Niditra ho mpanelanelana ireo mpanolotsain’ny tanàna
Misy olom-boafidy iray lisitra tamin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana ary misy lany tamin’ny alalan’ny antoko hafa ihany koa izahay mpanolotsaina monisipaly mijoro eto,
Moramanga an-tampon-tanàna Hodinihana ny fampidirana angovo azo havaozina
Tonga eto amintsika eto Madagasikara efa ho 3 herinandro Atoa Jean Axel Epiloïs izay ben’ny tanàna lefitr’ i Sainte Suzanne atsy amin’ny nosy La Réunion izay tanàna mpirahavavy amin’i Moramanga any Alaotra Mangoro.
Ny minisiteran�ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny minisiteran�ny fambolena sy fiompiana no tsy mahay mifandamina dia ny tanora mpianatra no sahirana.
Niato ny fampianarana tao amin’ny oniversite Ambohitsilaozana Ambatondrazaka, sampan'ny oniversite Toamasina taorian’ny fitokonana nataon’ny mpianatra, nidinan’izy ireo an-dalambe nihazo ny biraon’ny faritra Alaotra Mangoro ny talata 6 desambra 2016 teo. Efirano hianarana no fototry ny olana. Nalain’ny Centre Agricole (CAFPA) mantsy ny trano fianaran’izy ireo ao Ambohitsilaozana, araka ny fampahafantarana azon’izy ireo ny faran’ny herinandro teo. Tsy manaiky ny hamindrana azy ireo amin'ny toerana hafa anefa ireo mpianatry ny oniversite Ambohitsilaozana izay tokony hamita ny taom-pianarana hatramin'ny janoary 2017. Taorian’ny fifandaminan’ny tompon’andraikitra ao an-toerana, dia tapaka fa hitohy ny fampianarana manomboka amin’ny alatsinainy, ary hampiasaina hamitana ny taom-pianarana ny efitra roa amin’ny efatra nalain’ny CAFPA.